सन्दीप लामिछानेलाई दिल्लीले किन दिएन खेल्ने अवसर ? - २६ कार्तिक २०७७, NepalTimes
सन्दीप लामिछानेलाई दिल्लीले किन दिएन खेल्ने अवसर ?
२६ कात्तिक, काठमाडौँ ।
युएईमा मंगलबार सम्पन्न १३ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)को उपाधि मुम्बई इण्डियन्सले जित्दा नेपाली नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम दिल्ली क्यापिटल्स उपविजेता बन्यो । तर नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई यो सिजनमा दिल्लीले कुनैपनि खेल खेल्ने अवसर दिएन ।
दिल्लीले सन्दीपलाई सन् २०१८ को अक्सनमा तीन वर्षलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको थियो । जस अनुसार दिल्लीमा सन्दीपको अन्तिम सिजन यहि हो । आगामी अक्सनका लागि आफ्नो प्रभाव र पहिचान बनाउन यो सिजन सन्दीपका लागि महत्वपूर्ण हुने थियो तर यसकालागि अवसर दिएको दिल्ली नै बाधक बनेको छ । सिजनको सुरुवाती खेल देखि फाइनलसम्मका सबै खेलमा सन्दीप मैदान बाहिरै रहे । दिल्लीले फाइनलसम्म खेलेका १७ खेलमै सन्दीपलाई बेन्चमा समिति गरिएको छ ।
आइपिएलको १३ औँ संस्करण सुरु हुनुअघि सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) मा जमैका तलाबाजबाट खेलेर यूएई पुगेका थिए । सिपिएलमा १२ विकेटसाथ स्थिर प्रर्दशन गरेका सन्दीपको मनोबल उच्च थियो । यद्यपी टिममा चार विदेशी कोटामा स्थान बनाउन उनलाई सहज नभएपनि अघिल्ला संस्करणको प्रदर्शनका आधारमा दिल्लीले पुरै सिजन मैदान बाहिर राख्छ भन्ने अनुमान भने उनलाई थिएन । दिल्लीले सन् २०१८ मा सन्दीपलाई ३२ लाख नेपाली रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको थियो । पहिलो सिजनमा दिल्लीले सुरुवाती खेलमा सन्दीपलाई मौका दिएन । दिल्ली लिग चरणबाट बाहिरिएपछि अन्तिमका संभावना नरहेपछि तीन खेलमा मौका दिएको थियो । तर तीन खेलमा सन्दीपले पाँच विकेट लिदै सबैलाई प्रभावित पारेका थिए । जुन जादु अहिले दिल्लीले विर्सिएको छ । सन् २०१९ मा दिल्लीले सन्दीपलाई ६ खेलमा मौका दिएको थियो र ८ विकेट लिएका थिए ।
गतवर्ष दिल्लीले सन्दीपलाई मौका दिँदा दक्षिण अफ्रिकाका क्रिस मोरिसलाई बेन्चमा राखेको थियो । मोरिसलाई मौका दिँदा सन्दीपलाई बेन्चमा राखेको थियो । तर यस सिजनको लागि मोरिसलाई दिल्लीले फुकुवा गरेको थियो । यसैले पनि सन्दीप मैदान उत्रने सम्भावना बलियो थियो यसपटक । लगातार तेस्रो सिजन आईपीएलका लागि दिल्ली क्यापिटल्सको टिममा परेका सन्दीप पहिलो पटक एक खेल नखेली घर फर्किनु परेको हो । यो एक क्रिकेटरका लागि दुखको क्षण हो ।
यद्यपी अब सन्दीप नेपाल फर्किएर केहिदिन बसी बिग बास लिगका लागि अष्ट्रेलिया जाने छन् । जहाँ उनले आफ्नो क्षमता र छाप खेलमार्फत विश्वलाई देखाउने छन र दिल्लीलाई जवाफ दिनेछन कि तिमीले मलाई विश्वमा चिनायौ तर यो सिजनमा खेल्न नदिएर गल्ती गरेउ ।